Fitokonan’ny mpianatr’i Barikadimy : mitohy amin’ny fitakiana fizarana trano indray ny hetsika | NewsMada
Fitokonan’ny mpianatr’i Barikadimy : mitohy amin’ny fitakiana fizarana trano indray ny hetsika
Par Taratra sur 04/10/2017
Mitohy ny hetsiky ny mpianatry ny oniversite any Barikadimy Toamasina, omaly. Resaka fizarana trano indray ny olana mipetraka. Tonga ny Emmo/Reg nandamina ny mpianatra…
Anisan’ny antony mahatonga ny fitokonan’ny mpianatra ao Barikadimy ny tokony hizarana ny trano vaovao misy rihana telo vao vita sy ireo nasiam-panamboarana. Tokony hozaraina amin’ny mpianatra amin’ izany, ary antony manaraka ny vatsim-pianarana sy fitakiana ny tsy hampiakarana ny saran’ny fisoratana anarana.
Efa saika vita fifampiresahana tamin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fitantanana ny oniversiten’ i Toamasina avokoa ny antony roa farany ary efa eo am-pikarakarana ny filohan’ny oniversite, Velo Jerome, raha ny tafa nataony tamin’ny fahitalavitra iray. Fanazavana izay mbola tsy nahasakana akory ny fitokonan’ny mpianatra. Natsipin’ny filohan’ny oniversite any amin’ny orinasam-panjakana Jirama kosa ny momba ny trano. « Noho ny tsy fahavitan’ny fametrahana ny tariby mitondra herinaratra ho an’ny trano tsirairay, izay asa sahanin’ny Jirama, ny antony tsy izarana ny trano”, hoy ny filohan’ny
oniversiten’i Toamasina. Vokany, raha ny hetsiky ny mpianatra, omaly talata, ahina hifatratra amin’ny orinasam-panjakana Jirama indray ny hatezeran’ny mpianatra.
Manambana grevy ny any Mahajanga
Ankoatra ity any Barikadimy Toamasina ity, manambana hitokona ihany koa ny mpianatry ny oniversite any Ambondrona, Mahajanga. Mitovy ihany ny fitakiana amin’izany, resaka vatsim-pianarana sy ny fiakaran’ny saram-pisoratana anarana. Efa nisy ny fitakiana tonga eny amin’ny tompon’andraikitry ny oniversite Mahajanga momba azy ity. Tsy mbola ny valiny ofisialy fa fantatra kosa fa efa mikarakara momba ny vatsim-pianarana ry zareo any an-toerana. Ny eto an-dRenivohitra, milamina ny momba vatsim-pianarana satria anatin’ny fanefana izany ny eny amin’ny oniversiten’Antananarivo. Tsy misy ny resaka hetsiky ny mpianatra, hatreto.